Umhla My Pet » Andiyikholelwa ndiza Ukuthenga Le Ncwadi
ngokuthi Evan Marc Katz
Andiyikholelwa ndiza Ukuthenga Le Ncwadi
ukubuyekezwa: Mar. 31 2020 | 6 min ukufunda
kwiminyaka elishumi eyadlulayo, akukho mntu bacinga ukuba eyona ndlela yaye ilula ukuhlangabezana abantu baya kuba ngokusebenzisa ikhompyutha. kakuhle, Qikelela ukuba? Yi. EyoMqungu 2002: elinanye lezigidi abantu batyelela websites ukuthandana online. EyeKhala 2002: abantu abazizigidi elinesibhozo batyelela websites ukuthandana online. EtiMnga 2002: websites batyelela ezingamashumi amathathu anesihlanu lezigidi ukuthandana online. UCanzibe 2003: websites batyelela amane anesihlanu ezigidi ukuthandana online (comScore Media Metrix, New York Times, Isilimela 30, 2003). Oko phezu 40 ekhulwini bonke abadala abangatshatanga Melika. Kwaye nangona imbono yokuba le ulutsha eliphakathi, kwiqela lobudala phezulu ngokwemiqathango kwanda abafazi, ezingamashumi amathathu anesihlanu ukuya kumashumi amane anesine, walandelwa ngabantu, ezingamashumi amathathu anesihlanu ukuya kumashumi amane anesine. Eli qela likhulu elilandelayo? Amadoda nabafazi, amane anesihlanu ukuya amahlanu anesine (Yahoo, Inc., EyoMsintsi 2002).
Izizathu ukuba ukuthandana Internet kukekelise abadala ngaphezu midlalo Internet zicace. somethings ezingamashumi enye bakholisa ukuba wayesiya kwaye ngaphezulu ngokwezimali ekhuselekileyo, nto leyo ethetha ukuba umsebenzi obalulekileyo, kodwa ngoko uthando, leyo nto kukuhlawulela inkonzo ayiyongxaki. kunye, abantu xa ukwiminyaka yamashumi yabo emva kwexesha uziva uxinzelelo ukutshata kunye nabantwana. Nokwandiswa kwecandelo eliqina kufuneka eze kangangoko bengalindelanga nokuba. Kukho divorcees abangaphezu kwezigidi amabini phaya, kwaye kufuneka achaze ukuba umbono Ibar umdla ngaphantsi kude xa uzufumana epatini ngayo kunye abantwana bakho’ abahlobo.
Njengoko Good Njengoko Liba Eli?
Njengoko zikuyo njengoko Internet iye, ukuthandana Intanethi nangoku linyathelo nobuganga ikwizizukulwana abantu baqhele ngeendlela zemveli yokuhlangana. Kodwa into yokuba ezinye iindlela yokuhlangana ayamiselwa ngaphezulu ayenzi kubenza zihlala ngaphezu. Ycinge. Apho abantu ngokuqhelekileyo ukuhlangabezana amaqabane abo?
nemivalo? yeah, wena ngokuqinisekileyo banethuba elibhetele yokuhlangana “eyona” xa unxilile. Kwaye wonke umntu uyazi ukuba abantu iphezulu quality niso- rhoqo imivalo. (Ukuba athabathe nantoni kude yongcakazo kunye zamahenyukazi isizwe sethu olukhulu.)
amaqela? Kanye imivalo ngaphandle kroboka simahla nkxu itswele. Kodwa ngaphandle kokuba ube nomtsalane kakhulu, ngqindilili, okanye ezigudileyo, ukuchola umntu phezulu iiyure ezimbalwa embadleni akusoloko nto ilula ukuyenza. Ukuba nako ukubuza, “Wazi njani ukuba umkhosi?” unika amaqela inomda omncinci phezu imivalo.
umsebenzi? inyaniso: ekuphazanyisweni kunye naye uya konakalisa nayiphi na ukuziyolisa eyiyona usenokuba ubukhe ngaphambili wanayo emsebenzini. Xa uhlolisiso ukuba nje abunjiiweyo enqwondweni yam, 86 ekhulwini abemi kunokuba bekuya kuba abangaphangeliyo ngaphezu umsebenzi kwi-ofisi efanayo njengoko ex. Yiloo ubungqina obucacileyo ngokuchasene interoffice ukuthandana kanye apho.
icawe? Ucinga ukuba kufuneka zibe mpuluswa ebharini? Zama ukufumana lamasuntswana umntu xa kwiNdlu kaThixo, ingakumbi xa kwakusasa noTata ehleli ekunene ecaleni iqabane lakho yenzelwe elizayo. zibuze: kwenza oko uYesu? Ndiza sithandabuze usaya Ukubetha Internet kwakunye.
umtshato amalungiselelo? Elininzana namhlanje, mhlawumbi, kodwa kokususa isiqalelo abazikhethele ngokuqinisekileyo kwenza ndithandana lula kakhulu iphela. plus Big. Makhe ukugcina oku njengento “ingqalelo.”
imihla Blind? Ndiza kuthatha boyisiweyo zam, enkosi.
Kulungile, ngoko musani kuba nantoni na apha? umtshato amalungiselelo okanye Internet? A bonisa ekhawulezayo kwezandla ibonisa ukuba uninzi Melika nangoku okholosa zabo neemvakalelo zabo ukuthandana tenxileyo ngaphezu abazali babo’ ikwasithi ukuthandana ephosa-. ngoko ke, umtshato amalungiselelo uphumile yaye bumenza ukuthandana Internet.
emangalisayo, le nkqubo yedemokhrasi yethu.
Zonke iziqhulo bucala, ukuthandana ngekhompyutha lula kwaye kungabizi zonke iinketho ngasentla. Lula kwaye kungabizi bengengabo amagama amabini ufuna ukusebenzisa ukuchaza wena, kodwa ngokuqinisekileyo ogqibeleleyo iinjongo zethu ukuthandana online. Kuba mnye amahlanu eerandi wena uvuthuza ukusela ngexesha bar yendawo ngobusuku bangoMgqibelo xa sisondela ngokupheleleyo akukho namnye, ubunokuyenza iinyanga ezintandathu imeyile mda kwi AmericanSingles.com. kunye, indlela Kulula (awuzukuba ukuba umgca pick-up nangoovumazonke), ukwaliwa Kulula (nje endala ethululwayo-in-the-ubuso into ayisebenzi phezu khomputha), kwaye izinga lempumelelo iphezulu (kuba wonke umntu kule ndawo lingenakumbi, ngokuchaseneyo nakubathandi bar abaninzi nje ukuba Ndonwaba nabahlobo babo).
nokuba, ukugqithisela eziphambili ukuthandana Internet le: kwaye uzama ukwazi ikamva umnxeba wakho iqabane / awayethandana / okuthinjiweyo phambi udibana naye / yakhe. Oku kubalulekile kwaye ke ufanelwe qhubela.
Sonke siyayazi ukubaluleka yintabatheko kubudlelwane. Ndakhe wayenabo abahlobo abathathu ubudlelwane live-endihleli esinzulu yawa ngaphandle ngenxa yokungabikho umdla ngokwesini Mutual. Ngoko ke ndiza bakuphikayo ukuba yintlantsi ezingaphathekiyo ukuba zinqule “ikhemistri” alicandelo ezifunekayo ukuze sibe nolwalamano amagqabi. Ndikutsho, nokuba, ukuba indlela udibana nomntu unako zinyanzelisa ikhondo yonke ihambo yakho yokuqala, ukusebenzisana ikamva lakho, kwaye ke ngoko, ubomi bakho.
Okubhaliweyo: “Mholo, Mna uFred.” Subtext: “Ndingakubona ndize?”
Ngale ngcamango malunga nokuba kutheni ukuba njalo kakhulu kunzima ukuhlangabezana nabantu imivalo kunye namaqela. Isebenza into enjengale:
Yinto ngoMgqibelo ebusuku. Boys’ ubusuku ngaphandle. amantombazana’ ubusuku ngaphandle. Wonke umntu oneenjongo kabini(i) ukubutha nabahlobo kunye (b) udibana nomntu wesini esahlukileyo. Ukuba ukugonwa, ixesha elininzi usiya ekhaya ephaca. Mhlawumbi uthetha umntu, mhlawumbi hayi, kodwa mhlawumbi ubusuku yakho eyachithwa ukuthetha nakubahlobo bakho malunga nendlela shushu ingafikeleleki bonke abafazi wakhangela nendlela eningenakukholwa bekuya kuba ukuba ubunokufumana isibindi sokuthetha kubekho nomnye kubo. Ukuba umfazi, kokuba mhlawumbi wachitha ubusuku kukuthethelela off inkqubela abafana ezintandathu ehlabathini slimiest, abo imyun angamkeleki ukuba, emva kokuba omnye kuni, kwangoko baya iinyawo ezintlanu, wehla bar ukuba akubethe elilandelayo mfazi enomtsalane ababanga nako ukufumana. Yep, oko kwimarike yenyama ngaphandle phaya, kodwa bambalwa abantu benza nayiphi na intlanganiso quality. Apha kulapho ithiyori yam slave.
ngokwemveli, ukuba umsebenzi indoda ukuba ungasondeli emfazini ngexesha ibhari okanye iqela. Unako ukwenza oku eziliqela iindlela. imigca Pick-up zidla liphumelele. Omnye ungasoloko zama ezi abaphumeleleyo leyo enokubangela:
“Ndiyazi ubisi nayo olungileyo umzimba, kodwa umntwana, kangakanani na ukuba ukusela?”
“Ngaba uyakholelwa uthando xa emehlweni kuqala, okanye bahambe kufuneka kwakhona?”
“Ndingayifumana umfanekiso kuni, ngoko ke ndiza kukubonisa Santa into endifuna lweKrismesi? “
“izihlangu Nice. Afuna ngesondo?”
Kodwa nokuba sele unomtsalane kwaye onyanisekileyo njengoko imigca ngasentla kubonisa, njengoko umntu, wena ukuqala kwisigxina eziqatha. Nokuba uthi into alula nangqalile- ezifana, “Mholo, Mna uEvan,” nje ngokuya umfazi, usenza enye into ecacileyo kakhulu: Ufuna ukufumana eneehempe zayo. Yena waziyo ukuba. Uyayazi. Akukhathaliseki ukuba kwesingqengqelo ngayo, le enyanisweni into onikhuphileyo kuninikela ukuba siqale.
Ngoku ukuba ufuna lwento izinto ngakumbi, Usenokude uthi ukuba lesibini ungasondeli emfazini, wayekwazi kakuhle kakhulu ucinga ukuba uza enoba uyise kubantwana bakhe. Musa ndihleke. Yinyani. Kwaye oko kakhulu kuxinzelelo ukuba mfo. Ingakumbi ukuba uyakholwa factoid fabled ukuba intombi yenze isigqibo sakhe kwisithutyana semizuzwana emihlanu xa ndimbuza ndifuna ukulala nawe. xa inyaniso, ukugonwa akukho nto angayithetha kumbandela. Kodwa ukuba akayeki bebezama. Nje ngeziphumo, amawaka iincoko ungakhululekanga kuqhubeka ngosuku ngalunye ngokusela ezabelwe lonke Melika, nto leyo eyazicaphukisayo onke amaqela abandakanyekayo, ngaphandle bartenders, abakuvuyelayo zibatshonisayo umvandedwa wonke ezibizayo utywala top-kwithala.
Kanjalo, akukho nanye indoda / umfazi / ngesondo / subtext umtshato iya kushukuxwa. Endaweni kuyanyanzeleka ukuba ukudanisa le lokukhwela dance elingumnqakathi yenzekileyo amawaka eminyaka, okanye ubuncinane ukususela kokufika yesehlo bar. njani ezingaqondakaliyo ube ekwenzeni intetho encinane wasemzini? Kuba abantu abaninzi, impendulo “hayi kakhulu.”
Yeyiphi nto icholwa umntu ibhari okanye iqela ayisekelwanga nantoni ngaphezu womoya kuqala. Leyo nto ukuthandana ehlabathini ndiyimunce kunye nemigaqo ukuthandana online. Leyo nto wena ukufunda le ncwadi luqale. Kodwa ubusazi ukuba.
Thelekisa “Phakamisa” kunye icotha, ngakumbi indlela zobuqu ukuthandana intanethi kunye nawe no kuphela umhlobo wam Teresa (entsha iguquka abathandanayo Internet), ngubani kutshanje uthe kum ngomhla ifowuni: “Ngaphambili mna babeza kungena ulwalamano andule ukufumana ukuba bamazi umntu mna ndi thandana. Ngoku ukuba bamazi umntu ngaphambi kokuba uqalise ukuthandana kubo.” Trite, kodwa yinyani. Kukangaphi na wadibana umntu ngexesha bar, ekuzukisekeni inombolo yefowuni kunye ngokumanga, waza waqalisa ukufunda omnye komnye ngexesha elandelayo komhla wokuqala? Kukangaphi na waziphosa ulwalamano kuba umntu nomtsalane ngaphandle nokuba ucinga ukuba ababini kuni ziyahambelana? Ukubeka ngakumbi okhule, ngubani phakathi kwethu akukhange ngesondo nomntu babelangazi umbala kwamehlo akhe? Okanye ingaba abantwana? Okanye ikhule abantwana? Okanye uye elide njani ngengqawule?
Musa ukuba neentloni. Oku kuthiwa abadalwe. Kodwa ngenxa nje eqhelekileyo ukuba ufuna ukuzifaka engxoweni nomntu ongamaziyo cute, sengqiqweni yalapho ukuba ukuziphatha okunjalo ayisoloko ukwakha isiseko yeyona esiqinileyo ubudlelwane bexesha elide. Kwaye yiloo nto thina sonke emva, akunjalo? kakuhle, akunjalo?
isohlwayo, musa ukuphendula loo.
5 Imithetho Kukuba Wingman